VaTsvangirai Voshora Mauto Anoda Kuita zveMatongerwo eNyika
Chivabvu 27, 2011
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vashora zvikuru mumwe mukuru muchiuto vachiti mashoko avataura anoita kuti vanhu vavengane munyika.
Vachitaura pakuparurwa kwedare revakwegura kana kuti Zimbabwe Panel of Elders muHarare neChishanu, VaTsvangirai vashora mashoko aBrigadier General Douglas Nyikayaramba nevamamwe vakuru vemauto vanoda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vanoramba kutevedzera zvido zvevanhu nekutaura mashoko eruvengo nemhirizhonga.
VaTsvangirai vataura mashoko ekushora VaNyikayaramba kuvanhu vanodarika makumi maviri nevasere vanosanganisa madzishe, vaive muchiuto nevamwe vaive makurukota ehurumende vasarudzwa kuti vapinde mudare ravana chipangamazano muZimbabwe iri.
Vari muchirongwa ichi vanosanganisira mutungamiri weZINATHA, Professor Gordon Chavunduka, vaimbove gurukota redzidzo, Muzvare Fay Chung, nevamwe.
Brigadier General Nyikayaramba, avo vanova Commander we 3 Infantry Brigade kuManicaland, vaudza bepanhau reZimbabwe Independent neChishanu kuti vari kutsigira kurudziro yemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, yekuti paitwe sarudzo nechimbichimbi gore rino. VaNyikayaramba vati VaMugabe ndibaba uye havafanirwe kubviswa pachigaro. Vatiwo Zanu-PF ichakunda musarudzo dzichaitwa munyika.
VaNyikayaramba vati bazi rezvemari riri kutungamirwa naVaTendai Biti veMDC-T riri kunyima mauto mari richida kuti vapandukire hurumende.
Brigadier General Nyikayaramba, avo vakambozviti vasiya basa rechiuto vachienda kunotungamira sarudzo sa chief elections officer weZimbabwe Electoral Commission muna 2002, vanoti veMDC vari kurota kana vachida kuti mashandiro emauto avandudzwe. Vatiwo havafi vakasaruta VaTsvangirai.
Vaenderera mberi vachiti VaTsvangirai vakakunda musarudzo, ivo vanobva vaenda havo pamudyandigere.
Asi VaTsvangirai vati matauriro akadai anopa kuti nyika isagadzikane.
Nyanzvi munyaya dzezchiuto, Retired Colonel Martin Rupiya, mukuru weAfrican Policy and Research Institute, vanoti zvaitwa naVaNyikayaramba zvinoratidza pachena kuti mauto ave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.